INQABA YASECINDERELLA YOBUKUMKANI BOMLINGO IZA KULUNGISWA IINYANGA EZININZI NGAPHAMBI KWESIKHUMBUZO SEMINYAKA ENGAMA-50 - OKUNYE
Inqaba yaseCinderella yoBukumkani bomlingo iza kulungiswa iinyanga ezininzi ngaphambi kwesikhumbuzo seminyaka engama-50
Umsebenzi uya kuqala kwiNqaba yaseCinderella kwiiveki ezizayo kwaye uqhubeke ehlotyeni.
I-Cinderella Castle kwi-Walt Disney World iya kudlula inyanga yonke eya kunika i-iconic ye-Magic Kingdom inkangeleko entsha enesibindi phambi kwe-50th isikhumbuzo se-Florida theme park.
Umsebenzi uza kuqala kwiNqaba yaseCinderella kwiiveki ezizayo kwaye uqhubeke ehlotyeni, uDisney wabhengeza.
Ulonwabo olungapheliyo emva kobusuku bomlilo obumangalisayo ngaphezu kwendawo ephawulekayo yepaki kunye ne-Mickey's Royal Friendship Faire umboniso wemihla ngemihla phambi kwenqaba uya kuqhubeka ngexesha lokwakha.
Umsebenzi wokuqala sele uqalile kunye nabasebenzi beDisney World bafaka izithintelo kumlambo ojikeleze inqaba ngaphambi kokukhupha amanzi, ngokutsho Iindaba zeWDW namhlanje .
Inqaba iya kuhlala ivulekile ngexesha lokwakhiwa, amagosa e-Disney World athi. I-Bibbidi Bobbidi Boutique hair kunye ne-makeup studio kunye ne-Cinderella's Royal Table restaurant iya kuqhubeka nokusebenza ngexesha lokulungiswa kwenqaba, amagosa athi. Ezinye iindlela eziya kwinqaba ziya kuvalwa okwethutyana ngexesha amagosa okwakha athe.
Ukulungiswa kwenqaba yoBukumkani bomlingo kwabhengezwa njengefilimu yoopopayi kaDisney ka-1950 yeCinderella ibhiyozela iminyaka yayo engama-70. UBukumkani bomlingo baqala ngo-1971 kunye nenqaba njengendawo ephambili.
IDisneyland inyusa amaxabiso amatikiti, yongeza eyona ndawo ibiza kakhulu kwezona ntsuku zixakekileyo
I-Disneyland ithatha inyathelo elilandelayo ekubuyiseleni imiboniso ephilayo kunye nemidlalo yasebusuku
Indlela iDisneyland esebenzisa ngayo idatha enkulu ukunika amandla i-app entsha ye-high-tech Genie
Iipaki zomxholo ziphezulu kwindawo yase-US yabahambi abangagonywanga, uphando luthi
I-Disneyland meme ye-viral 'Side Eyeing Chloe' ithengisa i-$ 75,000
I-makeover yasebukhosini iya kuhlaziya i-palette yombala we-Cinderella Castle kunye ne-blues enzulu kuphahla lwezindlu, iigolide ezingqindilili kwiindonga ezingaphezulu, iigrey ezimnyama kwi-rockwork kufuphi nesiseko kunye neepinki eziphaphathekileyo kwiindonga eziphezulu.
I-Disneyland yenza uhlaziyo olubanzi olufanayo lwe-Sleeping Beauty Castle kulo nyaka uphelileyo phambi kokuvulwa okukhulu kwe Iimfazwe zeNkwenkwezi: Umda weGalaxy . I-Disneyland isonge umphambili weNqaba yoBubuhle beSleeping kwiskrim sokuhombisa esinomboniso omkhulu wobugcisa bengcamango yenqaba eyandulela ukuvulwa kuka-1955 kwepaki.
I-Disney iyila iinqaba zayo ngokusebenzisa imbono enyanzeliswayo ngamatye amakhulu ezantsi kunye namancinci amancinci phezulu. Imibala yokupeyinta kunye neethayile zokuphahla ngokuthe ngcembe ziye zibe khaphukhaphu kwiindawo eziphakamileyo ukuze zomeleze imvakalelo yobude. Imibala efudumeleyo esezantsi kwenguqu yenqaba ukuya kwimibala epholileyo phezulu ukunceda ukugxininisa inkohliso ngakumbi.